mabasa uye nemabasa emuridzi wechigadzirwa agile
Kuru Agile Mabasa uye Mitoro yeMugadziri Wezvigadzirwa muAgile
Mabasa uye Mitoro yeMugadziri Wezvigadzirwa muAgile
Chigadzirwa Muridzi nderimwe remabasa makuru mumapurogiramu eAgile. Asi chii chinoitwa neMuridzi wechigadzirwa?
Muiti Wechigadzirwa ndiro izwi remutengi muScrum Team. Muiti Wechigadzirwa anowanzo kuve maneja wechigadzirwa kana muongorori webhizinesi uye ane chiono chezvinofanira kuitwa nechigadzirwa uye nemabatiro aanofanira kuita.
Pano, tinonyora mamwe mabasa akajairika ePO muAgile.
Munhu mumwechete ane basa rekuwedzera kudzoka pane mari
ROI yesimba rekuvandudza
Inotarisira kuona kwechigadzirwa
Kugara uchitangazve iyo Chigadzirwa Backlog
Inojekesa mibvunzo pane zvinodiwa
Inogamuchira kana kuramba chimwe nechimwe chigadzirwa kuwedzera
Sarudza kana kutumira
Inofunga kana ichienderera mberi nekusimudzira
Inofunga zvido zvevabatsiri
Inogona kupa senhengo yechikwata
Muiti weChigadzirwa anogara pakati pevakuru manejimendi timu, senge CEO neCIO, uye maScrum Teams uye ane basa rekuona kuti bhizinesi zvinodiwa zvasangana nemazvo uye nemazvo.
Kubudikidza nekugara uchitarisisa kusagadzikana kwechigadzirwa, Muridzi weChigadzirwa anogona kuisa pamberi zvinhu zvichitarisirwa pane zvinodiwa nebhizinesi.
Pakati peSprint yega yega, iyo Chikamu cheScrum Mhinduro kune Muridzi wechigadzirwa uyo anogona kusarudza kusarudza kutumira chigadzirwa kune vatengi kana kuita kumwe kunatsurudza chigadzirwa chisati chabuda.
Nekuva nechiratidzo chakajeka chechigadzirwa, Muridzi weChigadzirwa anotsanangudza Maitiro Ekubvuma echinhu chega chega chekusarira uye ndiye munhu akakodzera kugadzirisa chero mibvunzo iyo timu yeScrum ine pamusoro pezvinhu zvakasaririra kumashure.
Muridzi weChigadzirwa anofanirwa zvakare kuita muVashandisi Kugamuchira Kwayedza sezvo chigadzirwa chiri kuvandudzwa kuti uwane ruzivo rwekutanga rwechigadzirwa kuitira kuti chero zvigadziriso zviitwe pakutanga mukusimudzira kwete pane gare gare.
Anofanira kuva Muridzi weChigadzirwa ari munhu wehunyanzvi?
Muchokwadi, izwi rekuti technical Chigadzirwa Muridzi rinotsanangura munhu, kwete basa. Kunyanya, inotsanangura munhu ane technical technical uye anoshanda pane tekinoroji chigadzirwa. Zvinodaro kwete zvinoreva kuti Muridzi weChigadzirwa anozonyatsoda kuita chero hunyanzvi mabasa, sekugadzira software uye kukodha. Ivo havasi kunyatso kugadzira chigadzirwa - ivo vari kuita Chigadzirwa Management chinzvimbo mukubatana pamwe neSoftware Yekuvandudza Timu, iyo Scrum Chikwata.
Kuti kambani iwane kukosha kwakanyanya kubva pachikamu, Muridzi wechigadzirwa anofanirwa kutarisa manejimendi manejimendi, kwete kusimudzira. Asi vamwe Varidzi veChigadzirwa vanofanirwa kunzwisisa hunyanzvi hwekambani padanho rakadzika uye kusangana neDevelopment Team kuitira kuti vabudirire kutungamira zano rechigadzirwa.
iphone 7 vs htc gumi
gore rekuchengetedza vs yekunze hard drive
iphone 11 mavara ku & t
Galaxy Buds Pro vs Buds Rarama
Nyaya dzebhatiri dzinokanganisa yako Motorola DROID Turbo?
Iyi smartphone chinhu chinogona kuponesa hupenyu hwako. Heano & maapos ekumisikidza iyo
Facebook kuyedza nyowani sarudzo iyo inobvumidza vashandisi kuwedzera mimhanzi kumifananidzo nemavhidhiyo
Maitiro ekubatanidza iyo iPhone kana iPad kune TV kana komputa yekutarisa
Iko yako Samsung Galaxy S4 inopisa here?
Ndarama platinum Samsung Galaxy Cherechedzo 5 yave kuwanikwa paAT&T, Verizon, uye Sprint
Kutanga S6 kumucheto kwakadzikama girazi screen mudziviriri anowana nyundo pavhidhiyo
Kamwe kamwe yako yakakura iPhone inodhura zvishoma kana iwe uchichinjisa iyo kune imwe nyowani